1220mm PC PE PP ekwenziweni sheet umngxuma umatshini - China Qingdao Hegu Wood-Plastic
PC / PE / PP Wosenza Grid Plate extrusion Line, PP umngxuma umatshini wokwenza sheet, PP amawele sheet eludongeni umatshini wokwenza, umgca imveliso ibhokisi nokuthutha PP, PP corrugatd s ...
Ixabiso Machine: 100,000-150,000 USD FOB
Impahla Product: impahla PC PP PE
Ububanzi Product: 1220mm
Product ubukhulu: 2-8mm
Ukusetyenziswa Power: 200KW
PC / PE / PP Wosenza Grid Plate extrusion Line, PP umngxuma umatshini wokwenza sheet , PP iwele udonga umatshini wokwenza sheet, PP ibhokisi ukupakisha umgca wemveliso, PP corrugatd umatshini wokwenza sheet
Le PP umgca wemveliso sheet umngxuma liyakuqonda imveliso esiqhubekayo PC / PE / PP ipleyiti igridi ezibuhlazarha, nto leyo echaphazela uhombiso yokwakha, nokuvumelana intengiso, nengxolo ubushushu mgwaqo ngokunjalo ukuphakheja. PE / PP ipleyiti gridi umngxuma i indawo efanelekileyo bhokisi iphepha ekwenzeni kwibhokisi ukupakisha. Lubonakala ngokobunzima ukukhanya, kwelona nqanaba eliphezulu, idama-proof, umhlwa anti. Ububanzi iimveliso ngu 1220-2100 mm, kwaye ubukhulu ngu-2 mm-12 mm.
imifanekiso Machine elayinini extrusion PP kuthembeke sheet:
1,Material mixing silo for PP umngxuma umatshini wokwenza sheet : it is used for mixing PP material with filling masterbatch and color masterbatch
2, Extruder for PP umatshini wokwenza sheet umngxuma: Le iqhosha lemenyu nesilungiselelwe ngokukodwa inkqubo ephambili kulawulo ukuqinisekisa palatalization kakhulu, enkulu kunye extruding izinzile.
Ukuba umthengi ufuna ukusebenzisa izinto recyle, nathi kunokusinceda umgca co-extrusion yokwenza kabini umaleko PP sheet ezibuhlazarha, umaleko ngaphakathi Ungasebenzisa izinto PP esirisayikilishiweyo, kunye nwebu Ungasebenzisa izinto PP entsha.
3, sife intloko nokuvunda for PP ezibuhlazarha umatshini wokwenza sheet: singakwazi kubaxhobisa intloko kufa
Screen kungaguqula PP umatshini wokwenza sheet umngxuma :Quick screen ngokutshintsha kwinkqubo ngamanzi iqinisekisa indlela elifutshane screen eguqukayo. Kabini-isikhundla kudityaniswe nesakhiwo ezikhethekileyo lokutywina ukuqinisekisa operation ezinzileyo wesikrini ngokutshintsha.
• Umngundo: • Umngundo isebenzisa ezikumgangatho ophezulu ingxubevange zentsimbi kunye isixhobo nobunzima ukuqinisekisa noba uxinzelelo feed influent kwi imilebe ukungunda, yaye isenzo kwakhona mahluko efikelela kuma-phantsi piece isiqinisekiso nokuba Ebubanzini nembasa.
Ezincamathelayo Ukulinganisa itafile ye PP ezibuhlazarha umatshini wokwenza sheet: Ukufudumeza tshintshiselwano kunye nenkqubo ngesantya ekhawulezayo zokupholisa xa Ukulinganisa kwinkqubo enye ngempumelelo kwaye ngokuqhelekileyo kunye nenkqubo lwepolitiki, eqinisekisa Ukulinganisa ngqo. Inkqubo ezincamathelayo wenza ezisezantsi ezimbini ezizimeleyo ngamnye lixhotyiswe fixed ajikelezayo imigca eziliqela ongenawo umoya uhlobo three point. Ngelo xesha, umgca ngamnye aqhube inkqubo olawula emoyeni kunye nenkqubo ezincamathelayo bonisa ukuba baqonde nokuba kwaye uzinzile ongenawo degree of plate komhlaba.
Itektala for PP ezibuhlazarha umatshini wokwenza sheet : Kukho iitrektara ezimbini. Eyokuqala ngamandla aphezulu, umlinganiselo ophakamileyo ukwehla, uhlobo multi-roller, kakuhle umsebenzi nesezantsi speed, imoto eliphezulu kwaye akwazi ukuzoba nembasa waphakama etafileni Ukulinganisa ngokulungelelana kwaye yolunye. Eyesibini yenzelwe ukususa uxinezeleko, yaye ukongezelela lixhotyiswe isixhobo ngohlangothi-ukusika ukuqinisekisa ububanzi esebenzayo kunye cut kakuhle emiphethweni.
Stress remover PP umatshini wokwenza sheet umngxuma : Indawo enkulu imo ukufudumeza conductive phambili nga ngempumelelo ukususa uxinezeleko ipleyiti kunye nokuphucula nokucaca nembasa.
Ukucanda kamatshini PP umatshini wokwenza sheet umngxuma: Esichanileyo wangoko nangoko kwintshabalalo ubude-esisigxina kunye nenkqubo ezizenzelayo-phantsi ekwenzeni kudityaniswe ingxubevange intsimbi blade elibukhali ukuqonda kwizinga eliphezulu ahlabayo.
imveliso sokugqibela esenziwa PP ezibuhlazarha umatshini wokwenza sheet isicelo:
Previous: Plastic Umatshini ri umatshini iibhotile PIT ri
Next: Umatshini iprofayile Plastic machine iprofayile UPVC
rhanga- Plastic Sheet Making Machine
maleko double machine sheet pp
pc machine sheet kuthembeke
pc machine sheet kophahla
pe machine sheet kuthembeke
Umatshini sheet kophahla pe
Plastic Box Ukwenza Machine
zeplastiki Bubble sheet Making Machine
Zeplastiki rhanga-Sheet Machine
zeplastiki Sheet Ukucoca Machine
zeplastiki Sheet Ukwaleka Machine
zeplastiki Sheet Ukubala Machine
Sheet ezitywiniweyo Cutting Machine Abavelisi
Sheet Plastic izithombe Machine
Sheet Plastic ngentlabo Machine
zeplastiki Sheet Ukusila Machine
zeplastiki Sheet Lamination Machine
zeplastiki Sheet Making Machine Price
Sheet yeplastiki Ukwenza Machine Qingdao
zeplastiki Sheet Manufacturing Machine
Sheet Plastic Ukubumbela Machine
zeplastiki Sheet Ukubumbela Machine
pp Iphepha incence umgca extrusion
pp machine sheet igridi
pp sheet kuthembeke umgca extrusion
PP umngxuma umatshini wokwenza sheet
PP Umatshini lokuvelisa sheet kuthembeke
pp Umatshini nokupaka wokwenza ibhokisi
pp Umatshini nokupaka wokwenza sheet
pp Umatshini pallet wokwenza sheet
Kk Pe PC Wosenza Grid Sheet Making Machine
pp machine sheet kophahla
pp udonga twin umatshini wokwenza sheet
PVC Siyixelise Marble Sheet Machine
PVC Siyixelise Marble Sheet Making Machine
PVC zophahla Sheets Ukwenza Machines
PVC Sheet Ukwaleka Machine
2500mm PE PC PP machine sheet incence
PP machine ekwenziweni ibhokisi
1700mm PE PC PP udonga iwele umatshini wokwenza sheet
1100mm PP PC PE Iphepha kuthembeke umatshini wokwenza
2100mm PE PP umgca wemveliso sheet nokupaka